Lapho uqala ukufuya izinyosi umlimi omusha wezinyosi udinga isidleke. Inyosi lapho izinyosi zizohlala khona, ziphakamise izinyosi ezintsha, zigcine indlovukazi yazo ebeka iqanda eliphephile futhi ikhiqize uju nezinye izinto zokudla. Amakholoni wezinyosi kuyodingeka futhi athunyelwe, emashumini abo, kusuka epulazini elinye kuya kwelinye ngezinjongo zokuvota.
Ungaqala ngesifuba esisetshenzisiwe, yenza isidleke noma uzithenge izingxenye ezivulekile bese uzihlanganisa, umsebenzi omkhulu. Okungcono ukuthenga isidleke esisha. Abaningi bezinyosi eNingizimu Afrika basebenzisa ama-hives aseLangstroth, okwenziwa ngamapulangwe asekhaya.
Izinkukhu zakamuva zenziwe nge-plywood yasolwandle, ehlala isikhathi eside ngaphezu kweplywood evamile. Izinyosi zepulasitiki eziphathekayo nezihlanganiswayo kukhona okunye okukhethwa kukho njengoba zihlala ziqinile kakhulu. Izinyosi zepulasitiki zihlelwe kahle kodwa zibiza.
Izindlu zeZinyosi Ezisetshenzisiwe
Ukuthenga izinyosi ezimbili noma izinyosi ezisetshenzisiwe zingase zifake izifo ekoloni yakho ngakho-ke kuyadingeka ukuba inzalo yesojoka esetshenzisiwe. Izakhi zomuthi ezisetshenziswayo zingelashwa ngamakhemikhali ahlambalayo njenge-hypochlorite ne-acetic acid noma ingahlushwa noma irradiated. Eningizimu Afrika, yonke imifuba ifakwe i-irradiated noma ifakwe ku-Waksol noma iparafini elishisayo kakhulu ukuvikela izinkuni. Thatha izinyathelo zokuqapha lapho usebenzisa i-Waksol emathunzini. Mhlawumbe ubuze isixhumanisi sakho sokugcina izinyosi ukuze uthole isiqondiso.
Indlu yeZinyosi Ehamba Phambili Yabaqalayo?
I-beehive iqukethe ikamelo le-brood esisekelweni futhi linamafreyimu angu-10 ekamelweni. Ifreyimu ngayinye ine-strip thin ye-wax ukuze kusize izinyosi ziqale ukwakha ishidi lazo le-wax.
Ngaphezulu kwekamelo le-brood, ufaka ikamelo eliphezulu, elinesivikelo phezulu, elihlanganisa amafreyimu angu-10 ne-strip encane ye-wax. Ungaba phakathi kwama-third and five supers ngayinye. Uju luvuna kusuka kulawa mafolda aphezulu.
Ukuze uvimbele i-bee indlovukazi ekubekeni amaqanda phezulu, ungabeka i-queen 'plastic or metal' phakathi kwama-brood nama-super chamber. Izinyosi zomsebenzi - ezincane kunezindlovukazi - zingahamba kalula phakathi kwama-grids.
Ngezinye izikhathi izicupho ze-pollen ziyasetshenziswa emnyango wezinyosi. Lezi zingcupho ziqoqa impova kusuka ezinyosi njengoba zibuyela emngceleni. Le impova kufanele iqoqwe nsuku zonke futhi iqhwa ukuze isetshenziswe kamuva njenge-high-protein yokudla okungeziweko yenkosikazi nangesikhathi sokuntuleka kokudla. Akubona bonke abalimi beeyo abavumelana nokusetshenziswa kwezicupho ze-pollen. Abanye bacabanga ukuthi kuphuza iqoqo le-nectar kanye nokuhamba kwezinyosi emngceleni.
Kunconywa ukuba ubeke isidleke sakho esitini noma izitini - uma nje kuvele phansi. Akulula kuphela emhlane wakho lapho usebenza ngoshukela, kodwa kuzosiza ekuvimbeleni ukuhlaselwa kwezinambuzane ezinwabuzelayo kanye namagundane. Inkampani yenkampani yezinyosi Bee Ware itusa ukunciphisa amafutha omdala endala noma izitini ukuvimbela izintuthwane ekuhlaseleni isidleke futhi zingabeki amathuba ophahleni. Gcina imihlathi emthunzini we-60% ngesikhathi sehlobo.
Indawo Yokuthenga Izindlu zeZinyosi Ikuphi?
Ucwaningo lapho imishini ye-hives neyezinyosi ezinhle kakhulu ingathengwa noma ijoyine inhlangano yendawo engase inikeze iseluleko ekuthengeni imihlathi. Futhi, ungase ukwazi ukuthenga ama-hive kusuka kubalimi bezinyosi abanolwazi. Ngaphezu kwalokho, iseluleko sabo kanye nokuqondisa kubalulekile kubaqalayo. Thenga izinyosi kanye nezinye izinto zokukhiqiza izinyosi ezivela ezinkampanini eziningi zezinyosi nezinkampani zezolimo ezitholakala eNingizimu Afrika.